Laga yaabaa 16, 2018 admin
ETF blockchain New bilawday on NYSE
A fund cusub blockchain sarrifka-baayacmushtari bilaabay Wednesday on New York Stock Exchange.
ETF The (BKC) heysta saamiyada ee 32 Shirkadaha ka shaqeeya cryptocurrencies ama ay ku lammaan technology blockchain. ETF waxaa maamula Rex Saamiyada oo si firfircoon u maamula Brian Kelly, ka geysato CNBC iyo madaxa BKCM, taas oo ay maamushaa ah istaraatijiyad hantida digital macaamiisha.
fund ayaa sidoo kale heysta saamiyada ee Square iyo chipmaker Advanced Micro Devices.
Wasiirka Maaliyadda Faransiiska ayaa sheegay in uu dareen ku saabsan cryptos
Faransiis Wasiirka Maaliyadda The, Bruno Le Maire, waxa uu noqday sarkaalka ugu sareeya Yurub outspokenly crypto taageero sida uu ku dhawaaqay meesha bannaan ee uu leeyahay "wadarta iyo taageero go'aamiyo."
Le Maire dhawaan sheegay, sida ay turjumaad xunxunna:
"Waxaan ahaa cusub ee sanad ka hor, laakiin hadda waxaan ahay dareen. Waxay igu qaadatay hal sano ah. Ha na baro muwaadiniinta walaalahooda inay France ka dhigi meeshii ugu horeysay ee blockchain iyo crypto-hanti-abuurnimo ee Europe. "
Coinigy bilawday app ganacsiga crypto Times salaysan
Coinigy, madal daruur ku salaysan ganacsiga cryptocurrency a, ayaa ku dhawaaqay olole caalami ah oo Coinigy Mobile, codsiga ganacsi oo Times ku salaysan cryptocurrency mobile ee macruufka iyo Android, macaamiisha siiyaan boosteejo ah oo ganacsiga iyada oo ku dhowaad 20 dhaafsi la isku xirnaanta xogta guud ahaan ka badan 40 is-weydaarsiga.
Si ka duwan ku dhowaad dhammaan dhufto ee ganacsiga cryptocurrency, app ganacsiga Coinigy Mobile u shaqeeyo on model Times meesha users waxaa la siiyaa helidda madal iyo functionalities ay $21.95 bishii.
macdanta Seeraar qalabka saaraha files Kancaan for $ 1B IPO
Kancaan Inc., gaare dunida ee labaad ee ugu weyn ee hardware macdanta Seeraar, gudbiyey codsi taxay in stock exchange Hong Kong ka, Wuxuu noqon lahaa crypto ee aduunka ugu weyn ee la xiriira IPO.
Kancaan ujeedadiisu tahay si ay u bilaabaan ganacsi sida ugu dhakhsaha badan July, qof aqoon ah ee arrinta ku yidhi, weydiinaya in aan magaciisa sababtoo ah macluumaadka waa gaarka ah. Shirkadda, salaysan ee Hangzhou, iibiyey 300,000 rigs macdanta Seeraar sannadkii hore oo lahaa dakhli ah 1.3 billion yuan ($205M). In ka badan sanadkii la soo dhaafay, dakhliga saafiga more hirkii badan laabmeen, sida ay talaadada ee xereynta.
Liiska A reer Kancaan oo noqon lahaa Hong Kong IPO ugu horeysay ka industry cryptocurrency ah.
madal la maalgashado Social eToro si loo bilaabo sarrifka crypto Maraykanka
eToro, a madal la maalgashado bulshada, waxaa bilaabay sarrifka cryptocurrency iyo boorsada jeebka mobile, iyo ballaarinta galay Maraykanka.
“Macaamiisha adduunka oo dhan waa in ay helaan qalabka ay u baahan yihiin in ay ka qayb suuqyada cryptocurrency, iyadoo aan loo eegin khibradooda,” CEO Isreal Assia ayaa sheegay in war-saxaafadeed.
Ganacsatada cryptocurrency Top awoodaan si ay u helaan dakhli by samaynta xilal ay hufan on eToro iyo jidaynayey ganacsatada kale in aad nuqulka Xirfado ay noqon doontaa.
boosteejo waxa uu leeyahay 10 million users ka 140 dalalka, ka China iyo Russia in Switzerland iyo United Kingdom.
Inkastoo waqtiga la siiyey ma jirin, waayo, markii fursadaha cryptocurrency heli Maraykanka uu noqon doono, eToro qorshaynayso in ay bixiyaan ganacsiga cryptocurrency in awood kasta oo dalka.
canshuurta dakhliga Azerbaijan helay cryptocurrency
Azerbaijan waxaa Qorniinkaas dakhli helay cryptocurrency, sida ay Nijat Imanov, Agaasimaha guud ee ku xigeenka siyaasadda cashuuraha iyo waaxda cilmi-baarista istiraatiiji u ah Cashuurta Wasaaradda, sida ay Taxana Wakaaladda Wararka ee dalka.
Haddii uu qof soo iibsataa cryptocurrency iyo iibiyo qiimo sare, faa'iido waxaa lagu diiwaangeliyaa sida dakhliga iyo qasab ku ah canshuur, Imanov yiri, yeeray canshuurta faa'iido ah hay'adaha sharciga iyo canshuurta dakhliga shakhsiyaadka ah.
Blockchain News 18 January 2018
telegraam jiitay $...
guul udhaqaajiyaa 16%, oo dhan Indhaha on Coinbase
Qiimaha Cabidkariin leeyahay ...
Somailand Caymiska Marsh shaqeeya IBM on boosteejo Blockchain
Marsh, hogaanka caalami ah ...